January 13, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha January 13, 2020
(Barcelona) 14 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku dhawaaqday goordhow inay shaqada ka cayrisay Tababare Ernesto Valverde, isla markaana waxa ay magacaabatay macallin cusub. Barcelona waxa ay bedelka Tababare Ernesto Valverde u magacaabatay macallinkii hore ee Real Betis, Quique Setien. 55’sano jirkaan Valverde ayaa ka caawiyey kooxda Barca inay ku guuleysato Sii akhriso
Ethiopia News January 13, 2020
Ethiopian PM Ahmed asks South Africa for help in talks on Nile dam construction FRANCE 24 Ethiopia’s dam: a lifeline or a show of power? Open Democracy Ethiopia asks South Africa to help to resolve dam dispute DW (English) Abiy Ahmed woos the Ethiopian diaspora in South Africa Mail and Guardian Ethiopia, South Africa to address xenophobia victims’ Sii akhriso
(Muqdisho) 13 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Mogadishu City Club ayaa maanta xeradeeda tababarka ku soo bandhigtay labo ciyaaryahan oo cusub, kuwaasoo boosas kala duwan ka ciyaara. Xiddigaha ayaa kala ahaa Cabdulaahi Ibraahim Diiriye oo ka yimid Shaleembood, balse dhowr kulan ka soo muuqday tartanka General Daa’uud, isagoo matalaayay kooxda Rajo iyo sidoo kale laacib […]Sii akhriso
Soomaaliya January 13, 2020
Muqdisho.(SONNA):- Ciidanka Kumaandooska Xoogga Dalka gaar ahaan Guutada 16-aad ee Danab ayaa Maleeshiyaadka Al-shabaab kala wareegay deegaanka Tooratorow oo hoosyimaada degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha hoose. Howlgalka ayaa ahaa mid qorsheysan oo Ciidanka ay argagixisada kaga sifeeynayen deegaanada ay ku dhibaateeyaan Shacabka Soomaaliyeed. Taliyaha Guutada Sii akhriso
(Muqdisho) 13 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Horseed FC ayaa galabta guul muhiim ah ka gaartay naadiga Raadsan kaddib markii 4-2 ay ugu adkaatay kooxdan, ciyaar qeyb ka ahayd horyaalka Somali Premier League. Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan ay u soo daawasho tageen taageerayaal tiro badan kuwaasoo kala taageersanaa labada kooxood ee […]Sii akhriso
(Manchester) 13 Jan 2020. Ninkii wajiga gacanta ku qarasanayey ee la sawiray isagoo sii galaya xarunta Tababarka kooxda Manchester United, kaasoo Jamaahiirta naadiga jahawareer ka dhex abuuray ayaa la ogaaday waxa uu yahay. Waxaa la garan waayey nin isagoo gaari Mercedes ah lagu wado, isla markaana isqarinaya la geeyey xaruunta tababarka kooxda Manchester United, kaasoo Sii akhriso
R/wasaare Khayre oo qaabilay wafdi ka socda hay’adda caafimaadka adduunka+sawirro
Muqdisho(SONNA) Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda hey’adda caafimaadka adduunka (WHO) oo socdaal shaqo ku yimid dalka. Agaasimaha caafimaadka loo dhanyahay, Dr. Peter Salama iyo waliilka Hey’adda Caafimaadka Adduunka ee Soomaaliya, Dr Mamunur Rahman Malik ayaa hoggaamiyay Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA):- Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho,kaas oo ajendihiisu ahaa Akhrinta 2-aad ee Hindise- Sharciyeedka Howlgabnimada, Xaqsiinta iyo Hibooyinka Xubnaha Ciidamada Qalabka Sida. Guddomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Senatar Cabdi Xaashi Cabdullaahi,waxaana Sii akhriso
Baladweyn- (SONNA):- Wafdi ka socda Hay’adda Caafimaadka Aduunka (WHO) iyo xubno ka tirsan howlwadeenada Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka ayaa gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wafdigan ayaa waxaa xarunta gobolka Hiiraan ku soo dhoweeyay Mas’uuliyiinta Maamulka gobolka oo uu ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Muxumed Caraale. Sii akhriso
(Barcelona) 13 Jan 2020. Tababare Ernesto Valverde ayaa u muuqday mid faraxsan kaddib markii sawirro laga qaaday isagoo ka baxayey xerada tababarka kooxda Barcelona goordhoweyd. Valverde ayaa dhoolla-caddeynayey isagoo kaxaysanayey Baabuurkiisa, markii uu ka baxayey xerada tababarka kooxda uu hoggaamiyo Barcelona, inkastoo mustaqbalkiisu uusan fadhin. Haatan kulankii u Sii akhriso